Nvidia PUBG mbanye anataghị ikike ats Ndị aghụghọ, Player ESP, Loot ESP, Wallhack - Gamepron
Nvidia PUBG mbanye anataghị ikike
Nvidia PUBG mbanye anataghị ikike bụ otu nke ga-agbafu gị. Site na Loot ESP a pụrụ ịdabere na ya, ruo PUBG Wallhack, aghụghọ a nwere ihe niile.
1 ụbọchị Access
Chọrọ inweta ohere anyị Ndị aghụghọ? 1zụta ụbọchị ụbọchị XNUMX taa!
1 izu Access
Nwere ike ịnweta PUBG Nvidia anyị ogologo oge ma ọ bụrụ na ịchọrọ, gịnị kpatara na agaghị izu?
Ọnwa 1 Access
Ndị raara onwe ha nye na nka nke hacking nwere ike họrọ 1-ọnwa nke ohere!
Ndị egwuregwu ndị ọzọ ga - agba mbọ ịchọpụta etu i siri jisi ike gbuo ha, mana ha amaghị na ị nwere ngwa nzuzo na akụkụ gị. Imeri bu ihe ejiri n’aka nke anyi Nvidia PUBG Hack
PUBG Nvidia mbanye anataghị ikike Ozi
PUBG (Player Unknown Battlegrounds) bụ egwuregwu royale nke na-edozi tebụl maka aha niile anyị amatala ma nwee ike hụ n'anya ụbọchị ndị a. Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ egwuregwu egwuregwu royale ị ga-atụle n'oge a, ọ bụ naanị ole na ole n'ime ha ga-eru ogo ọkwa dịka PUBG. Iji PUBG Nvidia mbanye anataghị ikike abụghị naanị na ị ga-ekwe nkwa na ị ga-ahụ ihe ịga nke ọma mgbe ị na-egwu egwu, mana ọ nwere ike ịtụgharị nsonaazụ maka ndị otu gị. Emezigharịrị nke ọma yana 100% echedoro, nke a bụ PUBG Cheat nke wuru ka ọ dịrị.
Nvidia GPU Naanị!
Bekee / Korean / Chinese
Atụmatụ niile dị n'ime dị mma nke na ịchọrọ ịtụle iji PUBG mbanye anataghị ikike oge ọ bụla igwu egwu. Enwere ọtụtụ atụmatụ Visual iji tụlee dị ka Enemy ESP, Enemy Info, na Loot ESP na ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ bara uru iji tụlee.
Ofụri Esịt customizable ESP
Enweghị Aimbot dị na otu a
Enweghị Misc dị na otu a
Banyere PUBG Nvidia
Ewubere PUBG Nvidia mbanye anataghị ikike ya na ebumnuche n'uche ya, ma ọ bụghị ọtụtụ ndị na-eweta mbanye anataghị ikike na weebụ ndị na-echegbu onwe ha gbasara ịme ego. Pụrụ ịdabere na anyị PUBG Nvidia eji Aghọ Aghụghọ Ule iji nye gị customizable atụmatụ na-eme ka gị gaminggba Cha Cha ahụmahụ na-atọ ụtọ otu, dị ka ị ga-emeri na uche. Jiri njirimara Radar iji chọpụta ebe ndị iro dị, ma ọ bụ ọbụna mee ka Nkebi ESP nhọrọ mee ka ị gụpụta ihe kacha mma maka onwe gị!
Enwere ọtụtụ ụzọ iji bịakwute PUBG anyị PUBG Nvidia mbanye anataghị ikike, naanị mara na ị ga-eri ọtụtụ nri “Ọkụkọ ọkụkọ”!
Enwere obere ihe iji guzo n'ụzọ gị mgbe ị nwere Gamepron n'akụkụ gị, dịka e mepụtara PUBG anyị iji mee ka ị bụrụ igwe dị iche iche. Nwere ike imeri egwuregwu ọ bụla n’echiche, ma ị na-egwu egwu Solo ma ọ bụ ndị otu egwuregwu adịghị mkpa - anyị na-enye gị ohere ịnweta atụmatụ niile achọrọ iji gosi ndị iro gị onye isi. Ọgụ Mode disables niile nke looting metụtara atụmatụ na-elekwasị anya na ọgụ, mgbe Speified agụ na-eme ka ị mụrụ anya dị ka otú ọtụtụ ndị na-ekiri. Ebe ọ bụ na aghụghọ a dị mfe iji, enwere obere ihe kpatara ị gaghị enye ya ihe!
In-game menu bụ a vasatail ahụmahụ maka ọbụna ndị kasị novice hackers gburugburu. Kwesighi ịbụ onye aghụghọ iji ghọta ngwa ọrụ anyị, dịka a rụrụ PUBG Nvidia Cheat iji mee ka ihe dị mfe. Ọ bụ ezie na aghụghọ ahụ abụghị ihe akaebe, ị ka nwere ike ịdabere na ya iji nyere gị aka ị nweta mmeri ndị ahụ na ngwa ngwa. Anyị ESP atụmatụ na-onwem na ọtụtụ shortcut nhọrọ, na i nwere ike iji Lụọ Mode toggle ụfọdụ ntọala na / anya ngwa ngwa na-enweghị na-echegbu onwe. Gaghị echegbu onwe gị banyere enweghị atụmatụ ma ọ bụ ọbụlagodi egwu nwere ike ijide gị na Gamepron.
Ee, nke a cheat bụ iyi àmà, na ọ ga-adịghị ahụ anya n'ihi na ndị na-ekiri.
Q3. Ọ na-arụ ọrụ na sava Kakao?
Mba, aghụghọ a na - arụ ọrụ na Steam.
Mba, ị nweghị ike igwu egwu na ihu ihuenyo.
Zụta igodo ngwaahịa na Nvidia PUBG eji Aghọ Aghụghọ Ule taa wee bido njem gị n’elu! Nwere ike ịhọrọ mbanye anataghị ikike n'ihi na dị ka ogologo dị ka ị ga-amasị mgbe ị na-arụ ọrụ na GamePron.
Na mbụ, ọ dị ka ọ gaghị ekwe omume! Nweta ikike aka anyị na Creed PUBG Hack.
Njikere Na-achị na anyị PUBG Nvidia Hack?